Forum serasera malagasy Mba azo alamina kely ve Mr Hery ilay fampisehoana ny lisitry ny lohahevitra - Dinika forum.serasera.org
Mba azo alamina kely ve Mr Hery ilay fampisehoana ny lisitry ny lohahevitra
Fitohizan'ny hafatra : Mba azo alamina kely ve Mr Hery ilay fampisehoana ny lisitry ny lohahevitra
endriny - 05/03/2015 05:48
Tokony mba hoe izay lohahevitra mbola misy mamaly dia miverina ety amin'ny pejy voalohany
hery - 05/03/2015 08:53
Alamina tahaka ny ahoana ohatra?
5laody - 05/03/2015 11:08
Salama daholo, Ny fahazoako ny lazain'i Endriny dia raha misy hoe valiny vao tonga (mety efa lohahevitra taloha be fa mbola misy mamaly hatrany ) ka milahatra toy ny amin'ny lohahevitra vao tonga.
bor2lais - 05/03/2015 12:05
Izany hoe : ny lohateny nisy namaly farany ("dernière modification") no aseho voalohany hatrany ... fa tsy voatery araka ny daty niforonany akory !
endriny - 05/03/2015 17:22
Izay no tiako nolazaina fa misaotra an'ireo nanazava.
Fa asa anefa aloha, satria mety ahamonamonaina be ihany koa raha toa ka hevitra iray no atao lavareny be...
hery - 06/03/2015 16:35
Misaotra anareo aloha tamin'ny resaka.
Efa nandalo tao an'eritreritro ireo fomba telo mety ho azo atao fa asa raha misy fomba hafa.
Ireto ny fomba telo nandalo tao an-tsaiko sy ny antony tsy nifidianako na nifidianako azy. Ny fomba fahatelo no nofidiko.
1. Izay resaka misy mamaly farany no miseho (mitovy amin'ny ao amin'ny Groupe ao amin'ny facebook)
- Ny olana amin'io dia raha vao misy mamaly ny hevitra iray dia manjary miseho voalohany na dia efa ela be aza no nosokafana. Mety hisy hevitra hijanona eo amin'ny pejy voalohany foana izany na satria misy mamaly na dia efa aman-taonany aza. Ny hevitra vaovao, vao nisy nanoratra dia mety hanjavona avy hatrany.
2. Izay resaka nisy nampiditra farany no miseho. (mitovy amin'ny fanaon'ny forum amin'ny ankapobeny)
- Ny olana amin'ito dia tsy ho hita ny sokajy sasany. Ohatra hoe lohahevitra fivavahana sy finoana no be mpanoratra vaovao foana, dia ho feno resaka momba ny fivavahana sy finoana ny pejy voalohany. Raha misy olona mametraka hevi-baovao mikasika ny Fiarakodia, ohatra, dia tsy ho hita satria takonan'ny resaka fivavahana 10 farany.
3. Ny eo anelanelan'ireo no nataoko, fa hitako koa hoe mbola mila fanatsarana.
- Amin'izao dia izay resaka nisy namaly farany no miseho, saingy iray isaky ny lohahevitra ihany. Izany hoe raha misy resaka 10 ao amin'ny fivavahana dia ny resaka 1 farany ao amin'ny fivavahana ihany no miseho. Dia miseho koa ny resaka 1 farany isaky ny lohahevitra hafa.
Ny olana hitako amin'io faha-3 izay ampiasaina amin'izao io dia:
- Misy resaka efa lany daty na dia atao hoe resaka farany amin'ny lohahevitra iray aza (ohatra hoe resaka Saint Valentin ao amin'ny resaka fitiavana)
- Tsy ilay tena resaka farany nisy namaly ao amin'ny lohahevitra no miseho fa ilay resaka nampidirina farany. Ohatra hoe misy namaly ny resaka efa taloha ao amin'ny resaka fitiavana, dia ilay resaka Saint Valentin no miseho fa tsy ilay resaka nisy namaly satria ilay resaka "Saint Valentin" no nisy nampiditra farany.
Dia angamba hahitsy fotsiny ireo olana roa amin'ny fomba faha-3 ireo dia ho mety indray io.
endriny - 06/03/2015 17:48
Diso kely aho Ra-Hery, hevitra no tiako lazaina fa tsy lohahevitra e.
Ilay fandaminana ilay lohahevitra mety sy ao tsara ka.
Fa io ilay hevitra narosonao 1) sy 3) io angamba no mahalaza azy.
bor2lais - 06/03/2015 19:02
Izaho koa diso fandray fa io nambarako ambony io dia ny teboka 1) saingy ampiharina any anaty lohahevitra tsirairay any !
5laody - 09/03/2015 17:22
Mankahery hatrany ny fanatsarana sy ny asa ataon'ny mpandrindra e.
Mety amiko aloha raha ilay eritreritra hanatsarana ny sosokevitra fahatelo ireo.
Izaho aloha tsy dia hoe isaky ny manokatra mailaka vao tonga eto.
Fa ankoatry ny hoe daty mandalo toy ny saint Valentin ireny, ahoana no ilazana hoe lany andro ny hevitra iray?
Raha dinika toy ny amin'ny forum info ireny ohatra azo akatona ny hevitra rehefa voavaha ny olana. (matetika tsy olana aloha no mipetraka fa adihevitra)...
Mahazotoa daholo e....